फुलाराको ‘म मरे भने त यो शहरको डेरामा...’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौ । युवा साहित्यकार एवं गीतकार भीष्मराज फुलाराको नयाँ गीत ‘म मरे भनेत यो शहरको डेरामा…’ सार्वजनिक भएको छ । बाबुल गिरीको स्वर, संगीत र संगीत संयोजन रहेको गीतको भिडियो गीतकार फुलाराको आफ्नै आधिकारिक यूट्युव च्यानल फुलारा इन्टरटेनमेन्ट नेट्वर्क मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ । फुलारा लिट्रेचर फाउण्डेशन नेपाल र द ल अफिसेस अफ बाशु डी. फुलारा पि.सि.को संयुक्त सहकार्यमा निर्माण गरिएको उक्त गीतको पोष्ट प्रोडक्शन ‘बि स्क्वायर मिडिया र रेकर्डिङ द पिक स्टुडियोमा भएको थियो । संगीत सागर मगरव्दारा निर्देशित उक्त म्युजिक भिडियोमा सम्वाद लेखन जनकराज खकुरेलको रहेको छ । त्यसैगरी ध्वनी मिश्रण दिनेश राजवाहक, छायांकन तथा सम्पादन बिश्वास भण्डारी, मेकअप क्रितिका श्रेष्ठको रहेको छ भने वाँसुरीमा संजीव मैनाली, गितारमा राहुल बिकले गीतलाई थप कारुणीक बनाएका छन् ।